I-China ithenge i-Horticultural Perlite isambuku sabalimi bezorhwebo Ukwenza kunye neFektri | Xinzheng
bathenge iHorticultural Perlite isambuku sabalimi bezorhwebo
I-perlite ye-Horticultural luhlobo lwezinto ezimhlophe eziyimbumba kunye nesakhiwo se-honeycomb ngaphakathi emva kokutshisa i-perlite ore emva kokushisa okukhawulezileyo kunye nokwandiswa. Umgaqo-siseko uthi: , Imveliso yezimbiwa engeyiyo ebuntsimbi kunye nokwandiswa kwevolumu yamaxesha angama-10 ukuya kuma-30.
Ukwaziswa kweplite yenkcubeko
Ukusetyenziswa kwe-perlite yenkcubeko
I-perlite ye-horticultural inokusetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lweeprojekhthi eziluhlaza ezinje ngotyani lwasezidolophini, iigadi zokugcina izitiya, ukutyala ingca, ukufakelwa kwemithi emikhulu, iigadi zophahla, iindawo zokupaka eziphantsi komhlaba, iindlela zendalo kunye neebhulorho, iiholo zokukhanya kwelanga, izityalo ezenziwe ngembiza yegadi, iindawo ezihambayo kunye neetyuwa -alkali ukuphuculwa komhlaba, kwaye kufanelekile ukulinywa koMhlaba iintyatyambo ezikumgangatho ophezulu kunye nemithi kunye nezityalo zoqoqosho ezingenalo ungcoliseko sesona sixhobo sityalo silungele ukulinywa kwendalo.
Izinto eziluncedo ze-hlgical perlite
1. Isiqulatho sokufuma esisebenzayo siphezulu nge-45%, esinokuthintela ngokufanelekileyo amanzi emvula.
2. Xa igcwele ngamanzi, ubunzima bayo bungu-450-600kg / m3 (ngokubanzi umhlaba umalunga ne-1800kg / m3), ethi isombulule ngokufanelekileyo ingxaki yomthwalo kulwakhiwo.
3. I-100% ye-substrate yokulima engahlambulukanga, izikhombisi ezizinzileyo zomzimba kunye neekhemikhali, akukho sidingo sokutshintsha umhlaba ukulima ixesha elide kwezityalo.
4. Umlinganiso wokungena kwamanzi ngokulinganayo yi-200mm / hr, enokuthintela ngokufanelekileyo iingozi zelitye.
5. Zicocekile kwaye azinavumba, kulula ukuzakha kwaye kulula ukuzigcina.
6. Ukuxhamla kwemveliso kukhuthaza kakhulu ukukhula nokukhula kwenkqubo yengcambu enemicu yezityalo, inefuthe elihle lokulungisa imithi, kwaye kwangaxeshanye yoyisa ukonakala kweengcambu eziphambili zomthi kubume besakhiwo.
Umgaqo wesicelo se-hlgical perlite
I-Horticultural perlite inemisebenzi elandelayo kulimo lwezityalo:
1.Loosen ulwakhiwo lwangaphakathi lwe-substrate kunye nokugcina utshintshiselwano oluqhelekileyo lwamanzi, irhasi kunye nesichumiso;
Ukucutha ubuninzi bobuninzi bezinto zokuhamba ezilula kunye nokufakwa;
3. Gcina ulwakhiwo oluzinzileyo lwesiseko.
Sebenzisa iipropathi ezingena ngembonakalo ye-perlite, eli nqaku le-perlite lilungele iingcambu zezityalo ukungena nzulu kwi-matlite matrix ukufunxa izondlo. Ama-pores e-perlite anokugcina isixa esikhulu samanzi kunye nezondlo, kwaye anikezele ngeemfuno zokukhula kwezityalo ixesha elide. Kwimveliso, inokusetyenziselwa ngokuthe ngqo ukutyala inani elikhulu lezityalo emhlabeni, kwaye inokusetyenziselwa ukuhlwayela iintyatyambo kunye nezityalo kwiimbiza zeentyatyambo. Kwangelo xesha, idlale indima yayo ekuguqulweni komhlaba, kulungelelwaniso lokuxinana komhlaba, ukuthintela indawo yokuhlala izityalo, kunye nolawulo lwentsebenzo yesichumiso kunye nokuzala. I-adsorption eqhubekayo, inokusetyenziswa njengesixhobo sokuthambisa kunye nesiphatho semithi yokubulala izitshabalalisi kunye nokubulala ukhula kwezolimo.
Ubungakanani be-horticultural perlite
Egqithileyo Iqondo lobushushu eliphezulu perlite eyandisiweyo iyathengiswa
Okulandelayo: Eyona nto ilungileyo yokucoceka kweHydrophobic Perlite esetyenzisiweyo kulungiso lwangaphandle
Animal Zeolite Feed Grade Powder additive for a ...
Isambuku esivaliweyo seSeli yePerlite yokuGqibela i-Thermal ...
i-zeolite yendalo kunyango lwamanzi china ma ...
kwizinga eliphezulu ngemihla Brilliant yandiswa perlite f ...